ဟာသ | Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
By maungmaung 2936 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
By aungaung 2950 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
ကသိကအောက်ဆန်သော မေးခွန်းနှင့် ဘုကလန့်အဖြေ
By yeaungnaing 2976 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဒေါက်ဖိနပ်ချွန်ဖြင့် တက်နင်းပြီး "ဆောရီးနော်. နာသွားလာဟင်" ဟု မေးသော အခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ - " ဟင့်အင်း. ခြေထောက်က သံနဲ့ လုပ်ထားတာ။ မာနေတာပဲ။ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်နင်းပါအုံး"
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး "ဆောရီး..။ အိပ်ပျော်နေတာလား" ဟု မေးသောအခါ အကောင်းဆုံး အဖြေ "ဟင့်အင်း ငါးလေးတွေ ဘယ်အချိန်အိပ်တတ်လည်း သိချင်လို့ Research လုပ်နေတာ"
By suwatisoe 2992 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
မနက်စောစောစီးစီ အမေက သားကို အိပ်ယာထဖို့ ယခုလို လာနိုး ပါတယ်။
အမေ - သားလေး ထတော့.။ မင်းကျောင်းသွားရတော့မယ်
သား - ဟင့်အင်း မေမေ။ သားသွားချင်ဘူး။
အမေ - မင်း မသွားချင်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ၂ ခု အမေ့ကိုပြော
သား - ၁ - ကျောင်းသားတွေ သားကို မုန်းတယ်။ ၂ - ဆရာမတွေ သားကိုမုန်းတယ်။
အမေ - နိုး။ ဒါ အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး။ သား ကျောင်း သွားကို သွားရမယ်။
သား - ဒါဆို သား ကျောင်းသွားသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက် နှစ်ခုကို ပေး
အမေ - ၁- မင်းက အသက် ၅၂ နှစ်။ ၂- မင်းက အဲ့ကျောင်းရဲ့  ကျောင်းအုပ်ကြီး။
By jasmineaye 3033 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
အမျိုးသမီး တစ်ဦးပေါ့။ ပထမ အိမ်ထောင်မှာ သားသမီး ၁၃ ဦး ထွန်းကား ပါတယ်။ အမျိုးသား ကွယ်လွန်တော့ ဒုတိယက အိမ်ထောင် ပြုပါတယ်။ သားသမီး ၇ ဦး ထွန်းကားပါတယ်။ ဒုတိယ အမျိုးသား ကွယ်လွန်ပြန်တော့ တတိယ အိမ်ထောင်ပြုပါတယ်။ သားသမီး ၆ ဦး ထပ်ထွန်းကား ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ ဆုံးပါလေရော။ ဇာပန တစ်ခုမှာ ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီးက "အို ဘုရားသခင်။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့တွေ အတူစုံစည်း ရပြီ" လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီတော့ မနေနိုင်မထိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သားဖွားမီယပ် ဆရာဝန် ကို သွားမေးပါတယ်။ "အဲ့အမျိုးသမီး ဘယ် အမျိုးသားနဲ့ အတူ ဆုံနိုင်မယ် ထင်လဲဗျ"ဒီတော့ ဆရာဝန်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေပါတယ်။
By YaminThu 3056 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
တစ်အောင့်လောက် အကြာမှာတော့ သူကပဲ နောက်တစ်ဆောင် ပို့ ပါတယ်။
"အော် ဒါနဲ့ မေ့သွားလို့ခင်ရေ။ ကိုယ် လစာတိုးတယ်။ ခင့်အတွက် ဘယ်လို စိန်လက်စွပ် ဝယ်လာပေးရမလဲ"ဒီတော့ အမျိုးသမီးက စာပြန်ပို့ပါတယ်။
"ဟယ် တကယ်လား။ နက်ဖန်မှ စိတ်ကြိုက်လိုက်ဝယ်လေ"
အမျိုးသား ကလည်း စာပြန်ပို့ပါတယ်။"ဟုတ်ဘူး သဲလေး။ ပထမပို့လိုက်တဲ့ စာတစ်စောင်ကို ခင် ဖတ်လား မဖတ်ဘူးလား သိချင်လို့ပါ" :P
သတိ စက်ပစ္စည်း မကလိရ
By jackiekyaw 3122 days ago on ဟာသ from blog.techspace.com.mm
မွေးမြူရေးတစ်ဦးဟာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး နွားနို့ညစ်စက် တစ်လုံး ဝယ်လိုက်ပါတယ်။
ခြံမှာ ဇနီးလည်းမရှိ၊ ဘယ်သူမှလည်း မရှိ၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခြေဆော့ ၊လက်ဆော့ ရှိသူဆိုတော့ နွားနို့မှာ မဟုတ်ပဲ သူ့ -- ပေါ်ကို စမ်းပြီး တပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နွားနို့ညစ်စက်ဟာ သူ့အတွက် အရသာ တစ်မျိုးပေးတယ်ဆိုပြီး ပျော်နေတာ ပြီးတဲ့အခါကျ စက်က ဖြုတ်မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ ခလုပ်ပိတ်လည်းမရ၊ လက်နဲ့ထုတ်လည်း မရ ဖြစ်နေတော့ အခက်တွေ့ပါပြီ။ ဒါနဲ့ စက်ပစ္စည်း ဖြန့်ချိတဲ့ ပင်ရင်းဆိုင်ကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ မေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ကတဲ့ဇာတ်ပွဲ - အပိုင်း ၁ ( ကာတွန်း/ ကိုရွှေထူး -ပြည် )
By jasmineaye 3131 days ago on ဟာသ from newworldnanda.ning.com
ရယ်စရာ ဟာသလေးများ ( ကာတွန်း - ငွေကြည် )
ရယ်ရွှင်ပြုံး ဟာသများ ( ကာတွန်း - ငွေကြည် )
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ကတဲ့ဇာတ်ပွဲ - အပိုင်း ၂ ( ကာတွန်း/ ကိုရွှေထူး -ပြည် )
ဟာသ - ၂ ( ကာတွန်း - ငွေကြည် )
ဟာသ ( ကာတွန်း - ငွေကြည် )
ကမ္ဘာသစ် ၂ နှစ်ပြည့် ဟာသလက်ဆောင်
အေးမောင် နဲ့ မီးဖိုချောင်
By yeaungnaing 3136 days ago on ဟာသ from thet-wai-blog.blogspot.com
မနေ့က ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေ ပြန်စဉ်းစားရင်း သတိရလာတဲ့ ကြောင်တောင်တောင် ကိစ္စလေးတွေကို ချရေးဖြစ်တယ်...
Weekly Weird Moment for the Week Ending April 13 - 2012 - My Mundane Morning
By gwenstanfo 3181 days ago on ဟာသ from www.mymundanemorning.com
same number of the facets asatrustworthy round brilliant cut.
tiffany jewelry has won some worldwide popularity, far in those locations where there's none stores. You do rather than have more as compared with your budget of get the wonderful gold jewelry.
မြန်မာ့ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာ မလိုဘူး
By kyawswaraung 3249 days ago on ဟာသ from www.maukkha.org
YangOn and YangOff
By maungmaung 3249 days ago on ဟာသ from mmjokes.com